Maanguddoon Naayijeeriyaa ganna 100 hidhaa gadhiifaman - BBC News Afaan Oromoo
Maanguddoon Naayijeeriyaa ganna 100 hidhaa gadhiifaman
7 Waxabajjii 2019
Image copyright Global Society for Anti corruption
Maanguddoon lammii Naayijeeriyaa umuriin waggaa 100 murteen du'aa itti murtaa'uun ''hidhamaa dulloomaa'' jedhamuun beekaman tokko dhiifamaan gadhiifamaniiru.
Maanguddoon kunis nama ajjeessuuf qophaa'usaaniitiif yakkii irratti argamuun itti murtaa'ee waggaa 18 ol mana hidhaa turan.
Igibunuchiin mana hidhaa eegumsa cimaa qaburraa wayita hiikaman intala isaanii, bakka bu'oota farra malaammaltummaa Addunyaa, dhaabbilee miti-mootummaa akka hiikamaniif duula gaggeessanitu fa'aatu simate.
Mana hidhaa hidhamtoonni bahanii hojii barbaaddachuuf dirqaman
Ertiraan hidhamtootaa amantaa hiikte
''Guyyaa kana qaqqabuusaanitti Waaqayyoon galateeffadha'' jette intallii saaanii.'' Ani nama gammadaa addunyaa kanaati'' jechuun BBC'tti himte.
Igibunuchiin dulluma keessa ijji arguus diddeetti, Akkasumas dhibee sukkaaraaf hospitaalaatti yaalamaa turani. Ammas wallaansaaf hospitaalatti kan argaman yoo ta'u, gara fuuladuraatti maal mudachu akka danda'urratti yaaddoo qabaachu himti.
Intalliisaanii kunuunsa tasisuuf dandeettii akka hinqabne himti. Yeroo mana adabaa turanitti ilmasaanitu ilamasaanii Phawuloos himannaa walfakkaataaf mana hidhaa sana keessatti waliin hidhame jirutu kunuunsa taasisaaf ture.
Innis waan dhiifamicha hinargatiniif mana hidhaa sana keessatti biraa hafe.
Bulchiinsi Igibunuchiidhaaf dhiifama godhe kan biraatiin bakka bu'eera. Kanaafuu, tarii ilmi maanguddoo kanaas dhiifama argachuufi dhabuun isaa waanti ibsame hin jiru.
Mana hidhaa Hindii hidhamtoonni bahanii hojii barbaaddachuuf dirqaman
6 Guraandhala 2019
Taanzaaniyaa: Manneen hidhaa saddeetiitti lammiileen Itoophiyaa 1,900 hidhaa jala jiru
14 Guraandhala 2019
"Rakkina cimaa keessa galleera, garuu ni mo'anna''
Reeffi Birgaader Janaraal Asaamminew Tsiggee gara Laalibalaa geeffame
'Abjuu nuti Itoophiyaadhaaf qabnutu wal hin fakkaatu'
'Mootummaan caasaa nageenyaasaa sakatta'uu qaba'
Laamiin Diyaak mana murtiitti dhiyaachuuf
'Rakkinni bara Dargii ture Naannoo Amaaraa keessatti akka mudatu nan beeka ture'
US gaggeessaa olaanaa Iraan qoqqobde
'Sudaan 'nama tokkoof qofa' intarneetii deebiste
Guutuu biyyaatti guyyaan gaddaa labsame